Linux | December 2019
Ịwụnye Visual Studio na Linux
Onye mmemme ọ bụla kwesiri inwe ngwa ngwa nke ọ ga-ede ma dezie koodu isi. Ihe ngosi Visual Studio bụ otu n'ime ngwọta kachasị mma maka Windows na Linux kernel operating system. Ejiri ụzọ dị iche iche dozie nchịkọta akụkọ ahụ a kpọtụrụ aha, nke ọ bụla ga-abụ ezigbo maka otu klas nke ndị ọrụ.
Mgbasa ozi Linux ndị a ma ama
Onye ọrụ nke na-achọ ịmara usoro sistemụ dabere na Linux kernel nwere ike ịnwụ n'ụzọ dị mfe na nkesa dị iche iche. A na-ejikọta ụba ha na oghere ndị na-emepe emepe, ya mere ndị mmepe gburugburu ụwa na-agbasi mbọ ike ijikọta usoro sistemụ mara. Isiokwu a ga-ekpuchi ndị kasị ewu ewu.
Nduzi iji guzobe Samba na Ubuntu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na otu faịlụ ahụ na kọmpụta dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ, usoro Samba ga-enyere aka na nke a. Ma, ọ gaghị adị mfe ịmepụta nchekwa ndị ọzọ na gị onwe gị, na maka onye ọrụ ọhaneze ọrụ a dị ka ọ ga-ekwe omume. Isiokwu a ga-akọwa otu esi edozi Samba na Ubuntu.
Ịwụnye Ngwa Ngwa na Ubuntu
Enwere ike ịbịnye mmemme na ihe ndị ọzọ dị na sistemụ arụmọrụ Ubuntu ọ bụghị nanị site na "Njedebe" site na itinye iwu, mana site na ngwọta ihe osise a ma ama - "Njikwa Ngwa". Ngwaọrụ a yiri ka ọ dị mma maka ụfọdụ ndị ọrụ, karịsịa ndị na-emetụbeghị ihe nkwekọrịta ahụ ma na-enwe nsogbu na akụkụ ndị a niile nke ederede a na-apụghị ịghọta aghọta.
Ịwụnye faịlụ TAR.GZ na Ubuntu
TAR.GZ bụ ụdị ọkọlọtọ ọkọlọtọ ejiri mee ihe na sistemụ arụmọrụ Ubuntu. Ọ na-echekwa ihe omume a chọrọ maka ntinye, ma ọ bụ ebe nchekwa dị iche iche. Wụnye ngwanrọ nke ndọtị a ka ọ ghara ịrụ ọrụ, ọ ghaghị ịbịakọta ma gbakọta. Taa, anyị ga-achọ ịkọwa isiokwu a n'ụzọ zuru ezu, na-egosi ìgwè niile na edepụta ihe ọ bụla dị mkpa ọ bụla site na nzọụkwụ.
Chọpụta ụdị nchekwa ahụ na Linux
Ịmara ọkwa kachasị gbasara usoro ahụ, onye ọrụ ga-enwe ike ịchọpụta nuances niile ọ na-arụ ngwa ngwa. Ọ dịkwa mkpa ịmara ozi gbasara ụdị nchekwa dị na Linux, mana ị ga-ebu ụzọ kpebie otu esi enweta data a. Hụkwa: Otu esi achọpụta nsụgharị nke nkesa Linux nyere. Ụzọ iji chọpụta ụdị nchekwa ahụ Ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ Linux maara na ọtụtụ n'ime ha na-edozi n'ọtụtụ ụzọ.
Chọpụta nsụgharị nke nkesa Linux
Na sistemụ ọ bụla enwere ngwaọrụ ma ọ bụ ụzọ dị iche iche na-enye gị ohere ịchọpụta nsụgharị ya. Ntughari abụghị nkesa na dabere na Linux. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi achọpụta Linux. Hụkwa: Otu esi chọpụta nsụgharị nke OS na Windows 10 Chọpụta version nke Linux Linux - nke a bụ naanị kernel, na-adabere na nke mmepụta dị iche iche.
Ịwụnye Java JRE / JDK na Linux
A chọrọ ihe Java dị iche iche iji mee ngwa na ngwa weebụ dịgasị iche iche, ya mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ kọmputa ọ bụla na-eche mkpa ọ dị ịwụnye ikpo okwu a. N'ezie, ụkpụrụ nke ịrụ ọrụ ahụ dịgasị iche na sistemụ arụmọrụ dịgasị iche iche, mana site na Linux na-ekesa ọ bụ mgbe nile banyere otu, anyị ga-achọ ịkọwa otú e si arụ ọrụ Java na Ubuntu.
Lelee ozi usoro Linux
Ọ bụghị ndị ọrụ niile site n'obi na-echeta ihe ndị dị na kọmputa ha, yana nkọwa ndị ọzọ dị iche iche, ya mere, ọnụnọ nke ike ịhụ ozi banyere usoro dị na OS ga-adị ugbu a. Egwuregwu ndị mepụtara na asụsụ Linux nwere ụdị ngwaọrụ ndị ahụ. Ọzọ, anyị ga-agba mbọ ịkọwa dịka o kwere mee banyere ụzọ ndị dịnụ maka ịlele ozi dị mkpa, na-ewere dị ka ihe atụ ụdị mbipute kachasị nke Ubuntu OS.
Ndị njikwa faili maka Ubuntu
A na-arụ ọrụ na faịlụ na sistemụ arụmọrụ Ubuntu site na njikwa kwekọrọ. Mgbasa niile e mepụtara na Linux kernel na-ekwe ka onye ọrụ gbanwee ọdịdị nke OS na ụzọ ọ bụla ọ bụla site na ịdebe ọhụụ dị iche iche. Ọ dị mkpa ịhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị iji mee ka mmekọrịta gị na ihe dị mma dịka o kwere mee.
Idobe TAR.GZ nchekwa na Linux
Ụdị data ụdị usoro faịlụ na Linux bụ TAR.GZ - nchekwa data mgbe niile na Gzip. Na ndetu aha ndị dị otú ahụ, a na-ekesa ọtụtụ mmemme na ndepụta nke nchekwa na ihe mgbe niile, nke na-enye ohere maka mmeghari dị n'etiti ngwaọrụ. Ibuchi ụdị faịlụ a dịkwa nnọọ mfe, maka nke a, ị ga-eji ọrụ a wuru na-arụ ọrụ "Terminal".
Ihichapụ akwụkwọ ndekọ aha na Linux
Usoro nhazi usoro kernel Linux na-echekwa ọtụtụ ọnụọgụ efu na ihe efu. Ụfọdụ n'ime ha na-enwe ohere buru ibu buru ibu na ụgbọala ahụ, ha na-abụkarị ndị na-enweghị isi. N'okwu a, nhọrọ ziri ezi ga-ewepu ha. E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee nhicha, nke ọ bụla n'ime ha dị na ọnọdụ ụfọdụ.
Ịhọrọ nkesa Linux maka kọmputa na-adịghị ike
Ugbu a, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ohere ịzụta kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nwere ezigbo ígwè, ọtụtụ ndị ka na-eji ụdị ochie ahụ, bụ nke karịrị afọ ise site na ụbọchị ntọhapụ. N'ezie, mgbe ị na-arụ ọrụ na ngwa ngwa, nsogbu dị iche iche na-ebili, faịlụ na-emeghe ruo ogologo oge, enweghị RAM zuru oke iji malite ihe nchọgharị ahụ.
Ntuziaka Linux Linux
Kali Linux - nkesa, nke kwa ubochi na-abawanyewanye. N'ihi nke a, ndị ọrụ chọrọ ịwụnye ya na-aghọwanye ndị ọzọ, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara otú e si eme ya. Isiokwu a ga-enye ntụziaka nzọụkwụ site na wụnye Linux Linux na PC. Ịwụnye Kali Linux Iji wụnye sistemụ arụmọrụ, ị ga-achọ ngwa ngwa mbanye na ikike nke 4 GB ma ọ bụ karịa.
Nchịkwa System nke dị iche iche Linux Distributions
Linux bụ aha mkpokọta maka ezinụlọ ndị na-emeghe ihe eji eme ihe na-adabere na Linux kernel. E nwere ọtụtụ nkesa dabere na ya. Ha niile, dịka iwu, na-agụnye setịpụ ụkpụrụ nke ọrụ, mmemme, na ihe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe. N'ihi iji desktọọpụ dị iche iche na tinye-ons, usoro ihe achọrọ maka mgbakọ ọ bụla dịtụ iche, ya mere ọ dị mkpa ịkọwa ha.
Linux tcpdump ihe atụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji nyochaa ma ọ bụ gbochie na netwọk netwọk na Linux, ọ kachasị mma iji njirimara njikwa tcpdump. Ma nsogbu ahụ na-ebili na njikwa ya dị mgbagwoju anya. Ọ ga-adịrị ka onye ọrụ nkịtị na-arụ ọrụ na ịba uru, ma nke a bụ nanị ile anya mbụ. Isiokwu ahụ ga-akọwa otú e si hazie usoro a, ihe syntax ọ nwere, otu esi eji ya, na ọtụtụ ihe atụ nke iji ya mee ihe.
Lelee ndepụta nke nchịkọta nchịkọta na Ubuntu
A na-echekwa ihe niile eji eme ihe, mmemme na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ na usoro nhazi usoro Linux na nchịkọta. Ị na-ebudata ndekọ dị otú ahụ na Ịntanetị na otu n'ime usoro ndị dị, ma tinye ya na nchekwa mpaghara. Mgbe ụfọdụ ọ ga-adị mkpa iji nyochaa ndepụta niile mmemme na components dị ugbu a.
Ntuziaka Ntuziaka MySQL maka Ubuntu
MySQL bụ usoro njikwa nchekwa data jikwa ụwa dum. Ọtụtụ mgbe a na-eji ya na mmepe weebụ. Ọ bụrụ na ejiri Ubuntu dị ka sistemụ arụmọrụ kachasị (OS) na kọmputa gị, mgbe ahụ ịwụnye ngwanrọ a nwere ike isi ike, ebe ị ga-arụ ọrụ na Terminal, na-agba ọtụtụ iwu.
Ụzọ nke ịmebe nchekwa ZIP na Linux
Mgbe ụfọdụ ọ na-adịrị mfe ịchekwa ihe omume, ndekọ na faịlụ dịka ihe ndekọ, ebe ọ bụ na n'ụzọ dị otú a, ha na-ewepụta obere ohere na kọmputa ahụ ma bụrụkwa nke nwere ike ịmegharị site na netwọk nwere ike iwepụ na kọmputa. Otu n'ime usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu bụ ZIP. Taa, anyị ga-achọ ikwu banyere otu esi arụ ọrụ na ụdị data ahụ na sistemụ arụmọrụ dabere na Linux kernel, ebe ọ bụ na a ga-eji ihe ndị ọzọ eji eme ihe maka mwepu ma ọ bụ ikiri.